Nhau - Kwakatangira mhiripiri
Peugeot zvirokwazvo izita reFrance. Mhuri yePeugeot yakatanga kuburitsa dzakasiyana siyana dzekugaya dzinokanganisa senge zana ramakore gumi nemasere. Iyo "Peugeot Kambani" iyo yakaburitsa ichi pepper shaker yakaita kuti vanhu vazhinji vavhiringidzike zvishoma nekuda kwezita reFrance Peugeot Motor Company. Zvakangofanana. Muchokwadi, vese Peugeot mhiripiri shaker uye Peugeot mota ndevekambani imwe chete. Peugeot ndiye akatanga kuburitsa mapepa ekugaya mhiripiri. Hapana aifunga kuti kambani iyi yaizogadzira mota kumashure ikako. Mhuri yePeugeot yakaisa mari mukugadzira kweanopfuura makore mazana maviri. Makore gare gare, ivo vakatanga kugadzira zvigayo zvemwaka. Munenge muna 1810, vakagadzira nekugadzira zvigayo zvekofi, zvigayo zve pepper, uye zvigayo zvemunyu. Gare gare, vakatanga kugadzira mabhasikoro, mavhiri emabhasikoro, amburera dzesimbi, uye mafekitori ekupfeka. Pakazosvika 1889, vaive mumhuri. Nhengo inonzi Armand Peugeot uye wechiGerman Gottlieb Daimler vakabatana kugadzira mota yemavhiri matatu inotyairwa, iyo iri mota inotyairwa nemhepo. Izvi zvishoma nezvishoma zvakaumba Peugeot Motor Company, uye Daimler akabatana nemhuri yeGerman yeMercedes-Benz kuumba Daimler-Benz.
Nhoroondo yemhiripiri mills ndeyechokwadi kumberi kupfuura nhoroondo yekugadzira mota. Iyo yekukuya mhiripiti yakagadzirwa nehama mbiri dzekambani iyi mumakore ekutanga. Imwe yainzi Jean-Frederic Peugeot (1770-1822) uye imwe yacho yainzi Jean-Pierre Peugeot (Jean-Pierre Peugeot, 1768-1852), iyo inowanzoonekwa modhi ndeye Z mhando. Takaona kuti patent date regayo remhiripiri raive 1842. Panguva yepamutemo, munin'ina wake Jean-Friedrich Peugeot akange afa, saka takafungidzira gore rekugadzira Inofanira kunge iri pamberi pa1822. Iyo michina chimiro cheichi chigayo pamberi pe patent muna 1842 yakati siyanei, asi patent Z-yakaumbwa mechimiro chimiro chiri kushandiswa nhasi, uye dhizaini haina kuchinja zvakanyanya kusvika zvino. Ichi chakakurumbira chigadzirwa dhizaini iyo yakachengetedza iyo yekutanga dhizaini kweanoda kusvika mazana maviri emakore. muenzaniso. Nheyo yePeugeot pepper mill iri nyore kwazvo. Iyo yakareba hollow chubhu ine simbi giya-senge yekukuya pazasi. Shaft yeguyo yakabatana nemubato panoperera chubhu. Gaya kunze kuburikidza nekukuya pazasi. Izvo zvakapusa kuwedzera, saka zvinenge zvisingaite kugadzira maturusi akasiyana. Nenzira iyi, yakashandiswa kweanoda kusvika makore mazana maviri.
Peugeot mhiripiri yave imwe yemhando dzekushandisa dzekudyisa muWestern chikafu. Yakave yakagadzirwa nekambani yeFrance Peugeot. Kune mavhezheni mazhinji akasiyana uye anogona kuoneka mumaresitorendi ekuMadokero pasirese. Kune munhu wepakati, chigayo chepepuru muresitorendi chishandiso chakanakisa. Kubva kugadzirwa uye kugadzirwa kwePeugeot, iyo Peugeot mhiripiri yave iri yekufanirwa-kuve nayo chishandiso mumaEuropean nemaAmerican maresitorendi.
Peugeot yakazogadzirawo mhiripiri yehurefu uye maumbirwo akasiyanasiyana, uye zvakare yakagadzira chigayo chemagetsi chinonzi Zeli Electric Pepper Mill (Zeli Electric Pepper Mill), asi chigayo chekutanga chakaita kunge Z chakaita mhiripiri chine pfungwa yakasarudzika yekunzwa kuti mumaresitorendi mu Kumadokero, paunonyanya kutarisisa kune yakasarudzika mhiripiri zvigayo, ndipo paunonyanya kuda kuunza yakashongedzwa yekudyira mamiriro.